बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड ! [भिडिओ] – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बुद्ध चित्तको खेतीले बनायो करोडपति, एउटै बोटबाट एक करोड ! [भिडिओ]
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कानपुरका सिंह बहादुर लामाले पछिल्लो ६ वर्षदेखि बुद्ध चित्त मालाको खेती गर्दै आएका छन् । लामाका अनुसार उनले एउटै बोटबाट एक करोड रुपैयाँसम्मको माला बिक्री गरे । चीनबाट आउने ग्राहक वा व्यापारीले बुद्ध चित्तका दाना साइज नापेर खरिद गर्छन् ।
प्रचण्डकी बुहारी पोखरा उपप्रमुखको उम्मेदवारमा सिफारिस
होली खेल्न भन्दै बोलाएर पार्टी प्रवेश प्रवेश गराए भन्दै युवाहरूले गरे विरोध, असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति प्रकाशित
मेलम्चीको पानी अब ४ दिनपछि काठमाडौं झर्छ : प्रधानमन्त्री ओली